प्याब्सनिष्टलाई बधाई सहित शिक्षापथ विमोचन - Everest Dainik - News from Nepal
प्याब्सनिष्टलाई बधाई सहित शिक्षापथ विमोचन
ललितपुर, चैत १३ । शिक्षालय मासिकको आयोजनामा प्याब्सनको १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
प्याब्सनका केन्द्रिय पदाधिकारीदेखि प्रदेश नं.३ का अध्यक्ष र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला अध्यक्षकाहरुलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमाणपत्र सहित बधाई दिए । कार्यक्रममा शिक्षालय मासिकले प्रकाशन गरेको शिक्षापथ नामक पुस्तकको विमोचन समेत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले निःस्वार्थ भावले निजी विद्यालय संचालन गर्नका लागि कसैले नरोक्ने बताए । श्रेष्ठले भने, ‘निजी विद्यालय संचालन गर्नको लागि सरकारले कुनै बन्देज गर्ने छैन, नियमन भने पक्कै गर्ने छ । आफ्नो जीविकाको लागि मात्र विद्यालय संचालन गर्न खोजेको हो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । शिक्षामा दीर्घकालिन रुपमा सेवाको भावले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । खाली नाफा कमाउनको लागि विद्यालय संचालन गर्ने हो भने सरकार भएको के अर्थ भयो ? हामीले लामो संघर्ष गरेर सरकारमा पुगेको के अर्थ भयो ? शिक्षा मन्त्रालय जसले चलाए पनि भईहाल्यो नि । कम्युनिष्टको सरकार किन चाहियो र ? अहिले सरकारले मात्र शिक्षामा लगानी गरेर पुग्ने अवस्था नभएपनि सरकारको मुख्य ध्येय सामुदायिक विद्यालयको उन्नतिका लागि काम गर्ने हो ।’
याे पनि पढ्नुस एभरेष्ट राष्ट्रिय खुल्ला तेक्वान्डो प्रतियोगीताको तयारी तीव्र
यसैगरी प्याब्सनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष टिकाराम पुरीले संस्थागत विद्यालयको हकहितको लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सरकारले निजी विद्यालयप्रति कुनै नकारात्मक धारणा राख्न नहुने बताए । पुरीले भने, “हामीले धेरैपटक प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग कुराकानी गर्दा निजी विद्यालयप्रति सकारात्मक कुरा नै देखिन्छ । निजी विद्यालयप्रति यदाकदा केही भ्रमित कुराहरु सुनिनमा आउँछ । यसलाई चिरेर सरकारसँग सहकार्य गरी शिक्षामा योगदान दिन हामी तयार छौं ।”
शिक्षासेवी रानी गुरुङ कक्षपतिले आजको आवश्यकता भनेको नैतिकवान नागरिक उत्पादन गरी राष्ट्रसेवक जनशक्ति बनाउनुपर्ने बताए । शुभताराका स्कुलबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई फर्केर हेर्दा देशको विभिन्न सेवामा कार्यरत रहेको भेटिए तापनि राजनीतिमा लागेको नदेखिएकाले अवको आवश्यकता भनेको राष्ट्रनिर्माणका लागि विद्यार्थीहरु राजनीतिमा पनि लागोस् भन्ने चाहाना राखे ।
शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले शिक्षापथ पुस्तक संस्थागत विद्यालयको दस्तावेजको रुपमा प्रकाशित भएको बताए। पुस्तकमा ४९ जना संस्थागत शिक्षासेवीहरुको जीवनी समेटिएकोले अब प्रकाशित हुने पुस्तकमा शिक्षाका अन्य विषयहरुलाई समेट्न सुझाव दिए ।
शिक्षालयका प्रधान सम्पादक श्याम तण्डुकारले प्याब्सनसँग धेरै लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि संस्थागत रुपमा प्याब्सनसँग निरन्तर रुपमा कार्य गर्ने बताए ।
सानेपाको एल्लो हाउसमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा निजी विद्यालयका संचालकहरु, शिक्षा पत्रकार तथा शिक्षासेवीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
ट्याग्स: Lalitpur, PABSON